ခေတ်ပြိုင်မြန်မာလူငယ်ပန်းချီဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ မင်းထက်အောင်၏ တတိယအကြိမ်မြောက်တစ်ကိုယ်တော်ပန်းချီပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းရှိ လောကနတ်ပန်းချီပြခန်းတွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ရက်နေ့မှ ၁၇ ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပန်းချီမင်းထက်အောင်(၃၄ နှစ်)သည် ရန်ကုန်ဇာတိပန်းချီဆရာဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်ခန့်မှ စတင်ကာ ခေတ်ပြိုင် ရေးဆွဲနေသောပန်းချီဆရာများ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် ပန်းချီဆရာများ ၏လက်ရာများကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူကာ ပန်းချီကားများစတင်ရေးသားခဲ့သည်။ မူလစာမျက်နှာ English Section အယ်ဒီတာ့ အာဘော် ရွတ်ဆိုမှု အနုပညာ ရုပ်/သံ အနုပညာ ဆက်သွယ်ရန် မာတိကာ
မူလစာမျက်နှာEnglish Sectionကဗျာကဗျာရှည်ကာတွန်းဆောင်းပါးအက်ဆေးအမှတ်တရဘဝ အတွေ့အကြုံဝတ္တုတိုဘာသာပြန်အနုပညာသတင်း---------စာမူစုစည်းမှု (၁)---------ရွတ်ဆိုမှု အနုပညာရုပ်/သံ အနုပညာ---------Kyaw Thu's Art Zoneဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပန်းချီ ပြခန်းနာဂစ် ပန်းချီပြခန်း---------Search this site---------Install the font in your font folder at control pannelBurmese Font	Latest Posts
‘Dance & Colours’, an art solo exhibition မြက်ခင်းပေါ် ဖြတ်မလျောက်ချင်တဲ့ ကဗျာ
ငါတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ(၁)
တို့ဟူးသုပ်နှစ်ပွဲ (အဲ … လက်ကြီးနဲ့မနယ်နဲ့ဗျ)
ပန်းချီဝသုန်ငါးနှစ်ပြည့်` `အမှတ်တရများနှင့်ရှင်သန်ခြင်း´ ´ပန်းချီပြပွဲ
မြက်ခင်းပေါ် ဖြတ်မလျောက်ချင်တဲ့ ကဗျာ
မြို့ပြကျူးကျော်၊ တောင်ပေါ်၊ ပင်လယ်အော်တေး
ချိုးဖဲ့ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ အပိုင်းအစတိုင်းဟာ ထကကြတယ်
ကိုယ်တုံးလုံးပန်းခြံ က ပေးတဲ့ အတွေး
သခင်မကြီးဒေါ်ကြည်ဦးသို့ သမင်လည်ပြန် အလွမ်း
မှော်ရုံဟေဝန် . . တောမြိုင်စွန်
၁၉၅၁ခု စာပေဗိမာန်ဆုရ ရွှေကိုင်းသား၏ မိန့်ခွန်းစကား
အဝေးရောက်နေ့များ သို့ ပေး သောစာ (၁)
ရွှေကိုင်းသားဆရာတော် အနှစ် ၁၀၀ပြည့်
နေ့ခင်းရယ်တဲ့ ကြောင်တောင်၊ သည်မောင်မှာ အလုခံရတယ်
အရိပ်တွေ၊အရောင်တွေ၊ အလင်းတွေ၊အမှောင်တွေနှင့် လှည်းတန်း
ကတုံးပြောင် ကေသာကျော့ မဖွဲ့ဆိုအပ်သော ကဗျာ
လက်ဘက်ရည်ဖိုး ကုန်သွားရသည့်အကြောင်း သားရေပင်ကောက်ခဲ့ဖူးသော
Get Latest Post	Follow @kaungkinmagazin
PoorBest မဂ္ဂဇင်း	- ကာတွန်း	Written by Po Po (Ace)	Sunday, 18 March 2012 18:18	ShareTweet
Last Updated on Sunday, 25 March 2012 04:13	Comments 0
hi impressive blog. We haveabig website to sale cars online throughout Myanmar. Please visit us back at: motors.com.mm/.../
Joomla gallery by joomlashine.comCartoon Collection1do it on your own.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/Jan2012/do it on your own.jpgohpar.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/Jan2012/ohpar.jpgpictureless cartoon1.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/Jan2012/pictureless cartoon1.jpghistory.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/Dec2011/history.jpgaung maws cartoon.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/Oct2011/aung maws cartoon.jpgwish.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/august2011/wish.jpgupt.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/jan2011/upt.jpgcartoon2.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/march2011/cartoon2.jpgmrburma.pnghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/march2011/mrburma.pngnew year.jpghttp://www.kaungkin.com/images/kaungkin/cartoon/April2011/new year.jpg	Supported in part byagrant from Foundation Open Society Institute (Zug)
Copyright@2012 Kaungkin Magazine .All Right Reserved.
Joomla Basic Theme adopted by Kaungkin. Powered by Joomla.